Abantu abaninzi baphatha abazalwana bethu abancinci ngeemvakalelo ezifudumele. Kwabanye, uthando luvela kwinyaniso yokuba abanini bezindlu zabo zokuhlala bayakwazi ukwabelana ngeemitha zokuhlala kunye neentando zabo. Kodwa a baninzi abantu bayazi ukuba umxholo wesilwanyana kwindawo yokuhlala ulawulwa ngumthetho.
Ukubeka nje, kwindlu yakho ungafaka ifuyo, kodwa kufuneka uyenze kunye nemithetho ethile engqondweni. Yinto enye xa uhlwayela isilwanyana kwindlu yakho, kwaye enye xa uhlala kwindlu yokuhlala. Apha imigaqo ihluke kancinane kwaye umnini wefestile akukhona wena kuphela, kodwa nabamelwane bakho. Apha kuyimfuneko ukuphulaphula umbono wabo. Kodwa into eyona nto inzima ukugcina izilwanyana kwiindawo zokuhlala kukuba unquma ukufudula indlu yokuhlala, kwaye isilwanyana sinakho. Kukho imibala efuna ukuqwalaselwa.
Enyanisweni, ukuba uyaqeshisa ngononophelo indawo yokuhlala kuyo yonke imithetho, kugqiba isivumelwano, ngoko umbuzo othi umxholo wezilwanyana ezifuywayo kufuneka uchazwe kwangaphambili. Isivumelwano kufuneka sibe nenqaku elinjalo, eliza kuthi umzuzu onjalo malunga nezilwanyana. Qiniseka ukuba ubuyekeze isivumelwano. Ukuba awufumani into enjalo, oku akuthethi ukuba kwindawo yokuqashisa uvumelekile ukuba ugcine izilwanyana, kwaye nayiphi na.
Ukuba unquma ukuhamba okanye ukuthenga inja okanye inkinki kwixesha elizayo, kuya kuba yimbopheleleko yokwazisa umninikhaya malunga nayo. Ukuba uyavumelana nalo mbandela, ngoko kufuneka ufune kuye incwadi eqinisekisa ukuba uyaziswa kwangaphambili malunga nezilwanyana zasekhaya kwaye uyavumelana ngokupheleleyo nale nto. Imvume yomlomo kule meko ayanele. Ukuba kukho naziphi iimbambano, ke uqinisekise ukuba xa umninimzi ekuxelele ukuba "yebo" ngeke kwenzeke.
Kwiimeko ezinzima, ukuba umninikhaya unxamnye nezilwanyana, kwaye ufuna ngokwenene ukuba neefilesi, unokuzizithengela isilwanyana esincinane, umzekelo, i-parrot, i-hamster, isilwanyana sasekhaya okanye i-piginea pig. Ukugcina izilwanyana ezihlala kwindawo yokuhlala, akukho mvume ekhethekileyo. Nokuba ukwazisa umninikhaya akuyimfuneko.
Ukuba zonke iinguqu ezinxulumene nemvume yokugcina izilwanyana kwiindawo zokuhlala, kwaye kule meko kwizindlu eziqashiweyo zichazwe kwaye zizalisekile, kuyimfuneko ukwazi ukuba kukho iminye imimiselo kwimimiselo ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwaye yazi.
Ngokomzekelo, ukuba ulungise i-kitty okanye inja kwindlu yakho, ufumene imvume kumnini-mnini-mali, kodwa emva kwexesha liqala ukuphazamisa okanye ukunyamezela abamelwane, unokwenziwa ngokusemthethweni ukuba ulahlwe isilwanyana okanye uphume ngaphandle kwendawo yokuhlala. Abamelwane abanakho ukuthanda ingxolo, ukukhahlela, ukungcola, okanye ukuzama ukuluma enye yazo.
Ukuba unquma ukuzifumana kungekhona nje inja engenasifo neyincinci, kodwa inkwenkwe yokulwa, awuyi kuyidinga kuphela imvume yemnini-mnini, kodwa kunye nemvume ekhethekileyo eyongezelelweyo. Oku kungenxa yokuba lezinja zizilwanyana ezibi kakhulu. Isisombululo siya kunika uxolo kwengqondo kuwe nabamelwane bakho.
Kubalulekile ukwazi ukuba umninikhaya imvume yokugcina isilwanyana kwindlu isebenza kuphela kwisilwanyana esithile. Ukuba ngokukhawuleza inja okanye ikati iyafa kwaye unquma ukuzithengela isilwanyana esitsha, kufuneka ufumane imvume yokufumana umninikhaya oya kuvumelana nemigomo yakho. Kule meko, imvume yokuqala ikhanseliwe.
Ukuba usunayo isilwanyana, uhlala kwindawo eqeshwe kwaye umninikhaya usinike imvume yakhe ebhaliweyo, akanakukunqaba ukuthenga enye enye. Ukuba uhlala kwizilwanyana ezincinci, apho imvume ingafaki khona, umnini-mhlaba kufuneka anike imvume ebhaliweyo yokuthenga inja okanye ikati.
Ukongeza, ukukunqanda ukuba ugcine isilwanyana kwixesha elithile, umninimzi akakwazi, ukuba usenayo isilwanyana kwaye umnini-ndawo uyaziswa malunga nayo.
Ukongezelela, isiluleko esibalulekileyo kunabanikazi beepilisi kukuba akukhathazeki ukuba yeyiphi indlu ohlala kuyo okanye eyasuswayo, kufuneka ukhumbule ukuba uthathe inja okanye ikati, uthatha uxanduva lokugcina isilwanyana kwifomu ecocekileyo. Izilwanyana akufanelekanga nakweyiphi na imeko ukukhupha ummelwane kubahlali babo. Ukuba uthatha isigqibo sokuba uthathe ikati okanye inja yokulondoloza ixesha elithile, khumbula ukuba ezi zifuyo ziyakwazi ukushiya imilingo eya kuzisa iimvakalelo ezininzi kubantu abahlala kwindawo. Musa uvila ukuhlambulula isilwanyana sakho, sinokuphepha iingxaki ezithile.
I sandwich ye Club
Iitamatisi ezibhaka nge-sauce eluhlaza
Unyango lwe-stomatitis kwiintsana
Isikhulu esifubeni u-Ani Lorak sididekisile abalandeli bakhe, isithombe
Ukunciphisa umzimba ngokufanelekileyo ngokutya kwe-oatmeal
URimma Markova: Umculi wabantu be-USSR
Ukuba umntwana uyagula ngeliholide
Ingaphakathi langoku kwindlela yokwama-bungalow